မဿဲ ၅: တောင်ပေါ်တရားတော် - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ကမ္ဘာချီဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2017-02 > မဿဲ 5: အတောငျပျေါဒသေနာ
သခင်ယေရှုသည်သွန်သင်ချက်အသစ် (၆) ခုနှင့်အသစ်သောသွန်သင်ချက်များနှင့်ခြားနားသည်။ သူသည်ယခင်သင်ကြားမှုကိုခြောက်ကြိမ်ကိုးကားခဲ့ပြီးအများစုသည်တိုရာကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်မလုံလောက်ကြောင်းခြောက်ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြောကြားခဲ့သည်။ သူကပိုမိုတိကျသောတရားမျှတမှုစံကိုပြသည်။
အခြားတစ် ဦး ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုပါနှင့်
အမျက်ထွက်တော်မူသောကြောင့်၊ သတ်ချင်သည်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး အားသေစေလိုသူသည်သူတို့၏လုပ်ရပ်ကိုမလုပ်နိုင်၊ မလုပ်နိုင်လျှင်ပင်သူတို့၏နှလုံးသားသည်လူသတ်သမားဖြစ်သည်။ သို့သော်အမျက်ဒေါသအားလုံးသည်အပြစ်မဟုတ်ပါ။ ယေရှုကိုယ်တိုင်တစ်ခါတစ်ရံအမျက်ထွက်ခဲ့သည်။ သို့သော်သခင်ယေရှုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားသည် - စိတ်ဆိုးသူတိုင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အဆိုပါနိယာမခက်ခဲစကားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလျက်ရှိ၏ ခြွင်းချက်စာရင်းမရှိပါ။ ဤအချက်နှင့်တရားဒေသနာရှိအခြားအချက်များတွင်သခင်ယေရှုကမိမိ၏တောင်းဆိုချက်များကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ထုတ်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ တရားဒေသနာမှထုတ်ပြန်ချက်များကိုချန်လှပ်ထားခြင်းမရှိသကဲ့သို့ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။
«Es ist auch gesagt: «Wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben» (V. 31). Das bezieht sich auf die Schriftstelle in 5. မွန် ၃4,1-4, welche den Scheidebrief als einen bereits eingeführten Brauch unter den Israeliten akzeptiert. Dieses Gesetz erlaubte einer verheirateten Frau nicht die Wiederheirat mit ihrem ersten Ehemann, aber abgesehen von dieser seltenen Situation, gab es keine Einschränkungen. Das Gesetz des Moses erlaubte die Scheidung, Jesus erlaubte sie jedoch nicht.
Wir würden einen Fehler machen, wenn wir Jesu Aussage als unveränderliches Gesetz auslegen. Denn Paulus wurde durch den Geist gezeigt, dass es eine weitere legitime Ausnahme für eine Scheidung gibt (1. ကောရိန္သု 7,15). Obwohl es sich hier um ein Studium der Bergpredigt handelt, sollten wir bedenken, dass Matthäus5nicht das letzte Wort zum Thema Scheidung behandelt. Was wir hier sehen, ist nur ein Teil des Gesamtbildes.
ဤနေရာတွင်သခင်ယေရှု၏ဖော်ပြချက်သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြရန်ကြိုးစားသည့်ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကွာရှင်းခြင်းသည်အပြစ်နှင့်အမြဲဆက်စပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်သည်အိမ်ထောင်ရေးဘ ၀ ၌ရာသက်ပန်နှောင်ကြိုးကိုရည်ရွယ်ခဲ့သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်သူကသူရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားသင့်သည်။ ကိစ္စရပ်များမဖြစ်သင့်သည့်အချိန်တွင်ယေရှုဘာလုပ်ရမည်ကိုဆွေးနွေးရန်ယေရှုမကြိုးစားခဲ့ပါ။
«Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist: »Du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten«» (V. 33). Diese Prinzipien werden in den Schriften des Alten Testaments gelehrt (4. Mo 30,3; 5. မွန် ၃3,22). Doch was die Tora klar erlaubte, Jesus tat es nicht: «Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron; noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füsse; noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des grossen Königs» (V. 34-35). Offensichtlich erlaubten die jüdischen Führer unter Berufung auf diese Dinge zu schwören, vielleicht um die Aussprache des heiligen Namens Gottes zu vermeiden.
Das Prinzip ist einfach: Ehrlichkeit – auf verblüffende Weise deutlich gemacht. Ausnahmen sind erlaubt. Jesus selbst ging über ein einfaches Ja oder Nein hinaus. Oft sagte er Amen, Amen. Er sagte, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber seine Worte würden es nicht tun. Er rief Gott zum Zeugen, dass er die Wahrheit sagte. Ebenso verwendete Paulus in seinen Briefen einige eidliche Versicherungen, statt nur einfach Ja zu sagen (Römer 1,9; 2. ကောရိန္သု 1,23).
ဒါကြောင့်တောင်ပေါ်တရားတော်ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေကိုစာသားအတိုင်းလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ထပ်မမြင်တော့ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးသားသင့်သည်၊ သို့သော်အချို့သောအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အမှန်တရားကိုအထူးသဖြင့်ထပ်မံအတည်ပြုနိုင်သည်။
တရားရုံးတစ်ခုတွင်ခေတ်သစ်ဥပမာတစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တရားကိုပြောနေသည်ဟုဆိုကာဘုရားသခင်ထံအကူအညီတောင်းနိုင်သည်ကိုကျိန်ဆိုရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ "ကျမ်းကျိန်လွှာ" သည်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟုပြောရန်အသေးအဖွဲဖြစ်သည်၊ သို့သော် "ကျိန်ဆိုခြင်း" မရှိပါ။ တရားစီရင်ရာတွင်ဤစကားလုံးများသည်တစ်လုံးတစ်ဝတည်းစကားလုံးများဖြစ်သည် - နှစ် ဦး စလုံးသည်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ပါ။
Jesus zitiert wieder aus der Tora: «Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Auge um Auge, Zahn um Zahn«» (V. 38). Es wird manchmal behauptet, dass dies bloss ein Höchstmass an Vergeltung im Alten Testament darstellte. Tatsächlich stellte es ein Maximum dar, aber manch- mal war es auch das Minimum (3. မွန် ၃4,19နှစ်ဆယ် 5. မွန် ၃9,21).
ယေရှု၏နောက်ဖော်ပြချက်ကိုလည်းချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းအဖြစ်ရှုမြင်ရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုဆီလျှော်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ။ အဓိကကတော့မူကိုနားလည်ဖို့ပဲ။ ဤစည်းမျဉ်းများမှဥပဒေသစ်ကိုမထုတ်ယူဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူအားစိန်ခေါ်ခွင့်ပြုရမည်။